Daawo Una Codee: UEFA Oo Soo Saartay Xidigaha Ku Tartamaya Goolkii Ugu Quruxda Badnaa Kulamadii Afraad Ee Champoins Leaque-ga. – WWW.Gool24.net
Daawo Una Codee: UEFA Oo Soo Saartay Xidigaha Ku Tartamaya Goolkii Ugu Quruxda Badnaa Kulamadii Afraad Ee Champoins Leaque-ga.
Xidhiidhka kubbada cagta Yurub ee UEFA ayaa sidii looga bartay markasta oo kulamada tartanka kooxaha yurub la ciyaaro waxay ku dhawaaqday xidigaha ku tartamaya goolkii ugu quruxda badnaa ee kulamadii afraad ee heerka Groupyada Champions Leaque.
Kulamadii xalay la ciyaaray ee Champions Leaque ayay kooxaha Yurub iska dhaliyeen 28 gool waxaana sidoo kale kulamadii talaadadii la ciyaaray layska soo dhaliyay 20 gool taas oo la mid ah kulamadii afraad ee Champions Leaque ay kooxaha Yurub iska soo dhaliyeen 48 gool laakiin UEFA ayaa soo saartay 5 gool ee ugu quruxda badnaa ee ay jamaahiirta kubbada cagta aduunku go’aamin doonaan ka ugu fiicnaa.
Hadda UEFA ayaa jamaahiirta kubbada cagta waxay u soo bandhigtay in ay daawan karaan isla markaana ay u codayn karaan xidiga ay u arkaan in uu usbuucan dhaliyay goolkii todobaadka ee Champions Leaque ugu fiicnaa iyada oo ay shan ciyaartoy ku tartamayaan.
Ugu horayn waxaa tartanka goolka ugu quruxda badan ee kulamadii afraad ee Champions Leaque hogaaminaya Stephan El Shaarawy oo gool aad u qurux badan ka soo dhaliyay kulankii ay Roma guusha wayn ka gaadhay Chelsea wuxuuna ugu jiraa goolkii furitaanka ee uu sida quruxda badan u dhamaystiray.
Waxa kale oo liiskan ku soo baxay Neymar Jr oo isna gool aad u qurux badan ka dhaliyay kulankii ay PSG xasuuqa u gaysatay kooxda Andrelecht isaga oo inta uu kubbad la dhex orday si cajiib ah kubbada ugu ganay goolka Anderlecht.
Xidiga kooxda Atletico Madrid ee Thomas Partey ayaa isna liiskan ku soo baxay kadib markii uu gool cajiib ah ka dhaliyay kulankii ay kooxdiisu markale ku fashilantay ee Qarabag waxaana sidoo kale liiskan ka soo muuqday Éver Banega oo isna gool darbo bidix xoogan ah ka dhaliyay kulankii Sevilla ay guusha ka gaadhay kooxda Spartak Moscow.
Ugu danbayn waxaa liiska musharixiinta goolka usbuuca ugu fiican ee UEFA Champions Leaque ku jira Lorenzo Insigne oo gool si qurux badan looga soo shaqeeyay ka dhaliyay kulankii Manchester City wuxuuna goolkan u dhaliyay Napoli.
Haddaba akhriste ma doonaysaa in aad noqoto dadka go’aaminaya goolkii ugu quruxda badnaa ee usbuucan laga dhaliyay Champions Leaque? Haddii ay jawaabtu haa tahay, halkan UEFA.Com ka daawo muuqaalada goolashan isla markaana u codee xidiga goolka ugu fiican dhaliyay. Daawo una Codee Goolkii Champions Leaque ugu fiicnaa Usbuucan.